: at 1/18/2012 03:20:00 PM
တချို့ ကပြောကြတယ် ၊ အရင်တုံးက သူမပြောကြားခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတွေ နဲ့ ခုလုပ်ရပ်ဟာ ရှေ့ နောက်မညီဘူး ၊ ၁၈၀ ဒီဂရီပြောင်းလဲသွားပြီတဲ့..။
ခု ဒီဗီယို ဖိုင်ကလေးကိုကြည့်ပြီး နှိုင်းယှဉ်မိလိုက်တယ် ။ တရုပ်ပြည်က တင်ဆက်တဲ့ ဆပ်ကပ်ပြပွဲလေးတခု ပါ ။ သိချင်ရင် ကလစ် လုပ်ကြည့်ပါ ..
ခနော်ခနဲ့ အထောက်အတိုင်လေးသာရှိတဲ့ လှုပ်ယိုင်ယိုင် ကြိုးကလေးတချောင်းအပေါ်မှာ ဟန်ချက်ညီညီ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ရယ် ၊ တောင်ဆိတ်ကြီး (သူမ) ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်မှာ အငြိမ်မနေ ဗီဇ ရှိတဲ့ မျောက်ကလေးကို သေချာအောင် ထိန်းပြီး အမြင့်ပေါ်ကနေ( ချောက်ကမ္ဘား ကြီးထဲ ) ပြုတ်မကျအောင် တည့်မတ် ထိန်းချုပ်ဖို့ရယ် ၊ အရှေ့ဖက်ကပန်းတိုင်ကို အတိမ်းအစောင်း မရှိ ၊အန္တရာယ် ကင်းရှင်း၊ အောင်မြင်စွာ အရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ရယ် အတွက် တောင်ဆိတ်ကြီး (သူမ)ဟာ ဘယ်လောက်များ ပင်ပန်းစွာ အားထုတ် လေ့ကျင့် စွမ်းဆောင်ခဲ့ရမယ် ဆိုတာ ကို နားလည် စာနာမိတယ် ။ခုလို လူအများရှေ့ မှာ အောင်မြင်မှု တကွက် ပြသနိုင်ဖို့ အတွက် သူမမှာ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ လဲပြိုခြင်း ၊ ဒါဏ်ရာရခြင်းတွေ ရင်ဆိုင်ပြီး ဇွဲ ရှိရှိ နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရမယ် ဆိုတာ သေချာတယ် ။သေးငယ်လှတဲ့ လမ်းကျဉ်းလေး အပေါ်မှာ ၁၈၀ ဒီဂရီ ကို အတိမ်းအစောင်းမရှိ အောင်မြင်စွာ ပြန်လှည့် ဖို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ဟာလည်း လွယ်တာမှ မဟုတ်ပဲ ။
ဒါတင်မကသေးဘူး ၊ ယိုင်လှုပ်နေတဲ့ ကြိုးတချောင်း အပေါ် မှ ထပ်ဆင့် အခက်အခဲ အမြင့် ( ပန်းအိုးတလုံး) အပေါ်မှာ တည်ငြိမ်စွာ အောင်မြင်စွာရပ်ပြနိူင်လိုက်တဲ့ သူမ ကိုမြင်လိုက်ရတော့ ဝမ်းပန်းတသာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမိလိုက်တယ် ။ ဒီပန်းအိုးလေးပေါ်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ရပ်တည်ပြနိုင်လို့ သူမရဲ့ အရည်အသွေး ပိုပြီး တောက်ပြောင်ခဲ့ရတယ် ။ အဲဒီ အရေးကြီးဆုံးအချိန်မှာ သူမ ခေါင်းပေါ်မှာ အငြိမ်မနေ ဇောက်ထိုး လုပ်ပြ ၊နေတဲ့ မျောက်ကလေး ကလည်း အရေးကြီးတာပဲ ။ အကယ်၍သာ ဒီမျောက်ကလေး ဟန်ချက်မညီ အတွဲမညီခဲ့ရင်လည်း သူတို့ ၂ ကောင်စလုံး အောက်ပြုတ်ကျနိုင်တယ် ။( ခဏခဏ စွပ်စွဲပြောနေကြတဲ့ ဂျောက်ကမ္ဘားကြီး ဆိုတဲ့ အသုံး အနှုန်း နဲ့ ကွက်တိပဲ လို့ ထင်တယ် )။
ဒီဆပ်ကပ်ထဲမှာ သူမရဲ့“ပန်းတိုင်”က တာစထွက်ခဲ့တဲ့ နေရာ ဖြစ်နေတာမို့ ၊ ပညာတွေ သိပ်တတ်ပြီး အရာရာကို ဘေးထိုင်ဘုပြောနေကြ ပုဂ္ဂိုလ် တချို့တလေ အဖို့စောဒကတက်နိုင်စရာ ရှိတယ် ။ရူပဗေဒ သဘောတရား အရ “အရွေ့ ” ဆိုတာ မရှိရင် “အလုပ်” လို့မခေါ်ဆိုနိုင်ဘူး။ ဟိုအရေး ဒီအရေးတွေ ဖြစ်စဉ် အခါက၊ သူမ ဘာတွေ လုပ်ပြခဲ့လို့လည်း။ခုအချိန်မှာရော ဘာတွေ လုပ်ပေးနေလို့ လည် ၊... ဘာညာ သာရကာ ပေါ့ .. ။ ဘာပဲ ပြောပြော၊ အဓိက ရည်မှန်းချက်က ၊ ပန်းတိုင်ကို အန္တရာယ် ကင်းစွာ နဲ့ အောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိနိုင် ဖို့ ပဲမဟုတ်ပါလား ။
တချို့ ကပြောကြတယ် ၊ အရင်တုံးက သူမပြောကြားခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတွေ နဲ့ ခုလုပ်ရပ်ဟာ ရှေ့ နောက်မညီဘူး ၊ ၁၈၀ ဒီဂရီပြောင်းလဲသွားပြီတဲ့..။ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော၊ သူမရဲ့ ၁၈၀ ဒီဂရီ မကလို့၃၆၀ ဒီဂရီပဲ ပြောင်းလဲ ပြောင်းလဲ ..အဆိုပါ “သူမ” သည် အမိ မြန်မာပြည်ကြီးနှင့်တကွ အဖိနှိပ်ခံ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ အား ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါး ဆင်းရဲစေရန် မည်သည့်အခါမျှ ပြုလုပ်လိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ခဲ့ကြောင်း၊ ယုံကြည်ဆဲဖြစ်ကြောင်း နဲ့ နောင်လည်း ဆက်လက် ယုံကြည်နေမည့်အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ် ။
အနှစ်ချုပ်ဆိုရမယ် ဆိုရင် အလုပ်တခုကို ဇွဲသတ္တိရှိရှိနဲ့ ဟန်ချက်ညီညီ အတွဲညီညီလုပ်ကြရင် ၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ဆီသို့ရောက်ကြမယ်ဆိုတာ မလွဲမသွေပါပဲ။
ဒီနေရာ မှာ -
တောင်ဆိတ်(သူမ) = ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊
မျောက် = လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား အပေါင်းတို့။
လမ်းခုလတ်မှ ခလုတ် (ပန်းအိုး)= မြန်မာပြည်ကြီး ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်းနေကြရစဉ် တွေ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲပေါင်းများစွာ ။။
အစရှိသဖြင့် အစားထိုး ခံစားကြည့်မိလိုက်တယ် ဆိုရင် .. စိတ်ဆိုး ကြမှာလား ။ သဘောတူကြမှာလား ။
အမြင်မတူလျှင်လည်း ဝေဖန်မှုများ ပေးနိုင်ပါသည် .. ကြိုဆိုလျှက်ပါ ။
:kiki : at 1/18/2012 03:20:00 PM
မိုးပျံမ said... | Wednesday, January 18, 2012 3:55:00 PM
ဘေးထိုင်ပြီး ငေးငိုင်နေသူတစ်ယောက်....ရင်သပ်ရှုမော တအံ့တသြ စဉ်းစားသွားတယ်။
Thandar Lwin said... | Wednesday, January 18, 2012 4:00:00 PM
တကယ်တော့ ယုံကြည်မှူဆိုတာ အင်အားပါဘဲ ။
ကျမ ကတော့ ကိုယ်လဲ ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်တော့ ယုံကြည်မှူပြည့်ပြည့်၀၀ ထားပါတယ် ။ သူများတွေ ဝေဖန် ကြတာကြည့်ပြီး ယုံကြည်မှူနည်းကြတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး ။ တကယ် ဆို အိမ်တအိမ်မှာ သားသမီးတွေ က အမေ က တော့ ကိုယ့်အပေါ်တကယ် စေတနာထားတယ် ဆို တာ အကြွင်းမဲ့ ယုံသလို ယုံစေချင်တာပါဘဲ လေ။
Khyl said... | Wednesday, January 18, 2012 4:54:00 PM
အော်... နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အချင်းချင်း ရဲ့ ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ ဝါဒတွေ အချင်းချင်း ပွတ်တိုက်ကြတဲ့ ပွဲပဲလေ.....
seesein said... | Wednesday, January 18, 2012 8:24:00 PM
စာလေးတွေ ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး
seesein said... | Wednesday, January 18, 2012 8:41:00 PM
မကိရေ ဘေးက တုတ်ချောင်းကြီးကိုင်ပြီး အနီဝမ်းဆက်နဲ့သူကိုတော့ မကိနဲ့အစားထိုး ခံစားကြည့်သွားတယ်နော
လငျးခတျေဒီနို said... | Thursday, January 19, 2012 12:30:00 PM
နှိုင်းယှဉ်ပြသွားတာလေးကိုက နှစ်သက်သဘောကျစရာပါပဲ မကိရေး)
mstint said... | Thursday, January 19, 2012 4:09:00 PM
Anonymous said... | Thursday, January 19, 2012 8:13:00 PM
your power of imagination and writing is awesome. I agree with you 100%.
your regular reader from Dubai.
SHWE ZIN U said... | Thursday, January 19, 2012 10:49:00 PM
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပိုစ့် လေးဘဲ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ဘဲ စဉ်းလည်းစဉ်းစား တတ်တဲ့ ကိ ပါဘဲ
မိုးလေး said... | Friday, January 20, 2012 1:44:00 AM
မှန်လိုက်တာရွှေကိရေ သွေးထွက်အောင်မှန်လွန်းလို့ 
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Sunday, January 22, 2012 12:31:00 AM
ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ ကြိုးတန်းမှာ လျှောက်နေရတဲ့ သူမအတွက် မျောက်လိုသတ္တဝါတွေ ညီညီညွတ်ညွတ်လိုက်ခဲ့ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ပန်းတိုင်ရောက်ရင် အတူတူရောက်မှာ မဟုတ်လား။
ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲက တောင်ဆိတ်က တော်လိုက်တာဗျာ။
မကီရဲ့ ဆက်စပ်ပုံက ပိုတော်တယ်။ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပါပဲ။
Anonymous said... | Monday, January 30, 2012 12:01:00 PM
ဒေါ်ကိ လုပ်မှ အန်တီလဲ တောင်ဆိတ်မကြီး ဖြစ်လို့..
Anonymous said... | Wednesday, February 15, 2012 10:17:00 PM
အေးဗျာ မကြည်နိုင်လောက်တွေ့လိုက်၇တာပါဘဲ။ လူတွေ၇ဲ့ အညာတာကင်း ၇က်စက်လွန်းပုံကိုဘဲ ခံစားလိုက်၇တယ်ဗျာ။ သတ္တ၀ါအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်း၇ှင်းကြပါစေ။